စွမ်းအင်ချွေတာခြင်း - ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲအစိမ်းရောင် | အစိမ်းရောင်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင် (စာမျက်နှာ ၂)
ICP (Power Control Switch) နှင့်၎င်းမည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုသင်သိထားသင့်သည်များကိုလေ့လာပါ။
သင် dimmer အကြောင်း၊ သူရဲ့ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးသင်သိသမျှသင်ပေးပါတယ်။ ဤနေရာတွင်ပိုမိုလေ့လာပါ။
ထိရောက်သောဇီဝရာသီဥတုဆိုင်ရာဗိသုကာနှင့်ပြည့်စုံသောအိမ်အမျိုးအစား Passive house အကြောင်းအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဤနေရာတွင်ရှာဖွေပါ။
ဤဆောင်းပါး၌ကျွန်ုပ်တို့သည် Kalanchoe ၏သွင်ပြင်လက္ခဏာများ၊ အသုံးပြုမှုနှင့်စောင့်ရှောက်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့ပြောပြလိမ့်မည်။ အလှဆင်ခြင်းအတွက်ဤစံပြစက်ရုံအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
ဤစာမူတွင် SEER နှင့် SCOP အတိုကောက်စာလုံးပေါင်းနှင့်အီလက်ထရောနစ်ထုတ်ကုန်များ၏စွမ်းအင်ထိရောက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ သူတို့၏အရေးပါမှုအကြောင်းသင်သိထားသင့်သမျှကိုပြောပြပါမည်။
ဤစာမူ၌သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာမူဝါဒနှင့် ပတ်သက်၍ သင်သိထားသင့်သမျှကိုသင်ကြားပေးသည်။ ဥပမာအချို့နှင့်မည်သို့မည်ပုံလေ့လာသည်ကိုလေ့လာပါ။
ဒီ post မှာတော့မင်းတို့သိသင့်တဲ့အရာအားလုံးကိုမင်းတို့သိထားတာကရေအောက်မီးဖိုဆိုတာဘာလဲ။ ပိုမိုသိရန်ရိုက်ထည့်ပါ
ဒီဆောင်းပါးမှာရွှံ့မီးဖိုလိုတယ်၊ ဘယ်လိုဆောက်ရမယ်ဆိုတာကိုသင့်ကိုပြတယ်။ ပိုမိုသိရန်ဤနေရာကိုနှိပ်ပါ
မင်းတို့သိထားသင့်တာကို bioethanol fireplaces တွေအားလုံးပြောပြပါမယ်။ ဒီမီးဖိုများ၏အဓိကအားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များကိုသိ။
သင်၏လူနေမှုပုံစံနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သောနှုန်းထားများအကြားရွေးချယ်ရန်လျှပ်စစ်မီးသည်မည်မျှ ပို၍ စျေးကြီးသည်ကိုသိရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့သင်ကြားသည်။ လာ။ ထိုအကြောင်းကိုလေ့လာပါ။
အချိန်ကိုဘယ်အချိန်မှာပြောင်းလဲလဲရှင်းပြတယ်။ ဥရောပသမဂ္ဂသည်အချိန်ပြောင်းလဲမှုကိုဖျက်သိမ်းတော့မည်ဖြစ်သည်။ ဤနေရာတွင်ရိုက်ထည့်ပြီးအားလုံးသိပါ။
သမားရိုးကျ LED မီးလုံးများနှင့်တူညီမှုကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အဓိကရှုထောင့်များကိုသင့်အားကျွန်ုပ်တို့သင်ကြားပေးပါသည်။ အကောင်းဆုံးကိုရိုက်ထည့်ပါ။
အိမ်အသုံးအဆောင်များ၏သုံးစွဲမှုသည်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားခပေးရသည့်စျေးနှုန်း၏အဆုံးအဖြတ်ပေးသောအချက်ဖြစ်သည်။ ဒီနေရာတွင်၎င်းကိုလျှော့ချရန်အဘယ်အရာကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ်ဆိုတာကိုသင်ပြပေးပါမယ်။ ဝင်!
မီးတောက်လောင်နေသောမီးသီးသည်ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိအိမ်များကိုထုတ်လုပ်ပြီးကတည်းကမီးထွန်းပေးခဲ့သည်။ ငါတို့နှုတ်ဆက်ဖို့လိုပါသလား? ဒီမှာတွေ့ပါ။
Lumens နှင့် watts များ။ သင့်အိမ်အတွက်အကောင်းဆုံးမီးသီးကိုမည်သို့ရွေးရမည်နည်း
Lumens သည်မီးသီးမှထုတ်လွှတ်လိုက်သောမီးပမာဏကိုတိုင်းတာ။ စွမ်းအင်နှင့်သုံးစွဲမှုနှင့်ဆက်စပ်သည်။ အကောင်းဆုံးမီးသီးမည်သို့ရွေးချယ်ရမည်ကိုဤနေရာတွင်လေ့လာပါ။
ဂေဟစနစ်မီးဖိုများသည်သဘာ ၀ အရင်းအမြစ်များထက်အရင်းအမြစ်နည်းပါးသည်။ သူတို့ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ၊ ဒီ post မှာဘယ်လိုလက္ခဏာတွေလဲ။
chronothermostat သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်တွင်အပူ၏အရည်အသွေးကိုတိုးတက်စေသောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ ဒီမှာအကြောင်းအားလုံးထွက်ရှာပါ။
အဆောက်အ ဦး များတွင်စွမ်းအင်ထိရောက်မှု
အဆောက်အ ဦး များရှိစွမ်းအင်ထိရောက်မှုသည်စုစုပေါင်းစွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနှင့်စုဆောင်းနိုင်သည့်စုဆောင်းငွေများကိုတိုင်းတာသည်။ သင့်အိမ်၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုမည်သို့တိုးတက်အောင်လုပ်ရမည်ကိုလေ့လာပါ။
လေကြောင်းစွမ်းအင်သည်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်များအပေါ် အခြေခံ၍ အလွန်ထိရောက်ပြီးလူကြိုက်များသောလေအေးပေးစက်စနစ်ဖြစ်သည်။ ဤနေရာတွင်၎င်း၏လည်ပတ်မှုနှင့်စျေးနှုန်းကိုသိရှိထားပါ။
Watts, Volts နှင့် amps
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံတွင် Watts ကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုကြသော်လည်း၎င်းကို volt နှင့် amps များနှင့်ရှုပ်ထွေးလေ့ရှိသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုခွဲခြားရန်သင်သင်ယူလိုပါသလား။
Stirling အင်ဂျင်သည်၎င်း၏မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်လေထုညစ်ညမ်းမှုကိုလျှော့ချနိုင်စွမ်းရှိသောကြောင့်လူသိများသည်။ ၎င်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများအားလုံးကိုရှာဖွေပါ။ ဝင်!
အပူကိုစုဆောင်းရန်အတွက်အပူရှိန်စုဆောင်းသူများသည်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သည်။ သူတို့ကဘာတွေလဲ၊ သူတို့ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာသိချင်လား။ ဒီမှာဆက်စပ်အရာအားလုံး။
Thermal Paint သည်လျှပ်ကူးပစ္စည်းကမ္ဘာပေါ်တွင်တော်လှန်ပြောင်းလဲသောတီထွင်မှုဖြစ်သည်။ သငျသညျဂုဏ်သတ္တိများအားလုံးနှင့်မည်သို့အလုပ်လုပ်ပုံကိုသိလိုပါသလား?
ဤစာမူ၌အိမ်သုံးလျှပ်စစ်မီတာတိုင်းတာမှု၊ လည်ပတ်မှုနှင့်စွမ်းဆောင်နိုင်မှုများအကြောင်းသင်လေ့လာပါမည်။ သင်၏စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကိုမည်သို့စောင့်ကြည့်ရမည်ကိုလေ့လာလိုပါသလား။
ဒီ post ကသဘာဝဓာတ်ငွေ့ဘွိုင်လာတွေဟာဘာတွေလဲ၊ သူတို့ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ၊ မတူတဲ့အမျိုးအစားတွေ၊ သင်ပိုမိုသိလိုပါသလား
ဇီဝဆောက်လုပ်ရေးသည်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများ အသုံးပြု၍ ကျန်းမာပြီးလုံးဝအကျိုးရှိသည်ဟုဟန်ဆောင်ကာဂေဟဗေဒအိမ်များဆောက်လုပ်ခြင်းအပေါ်အခြေခံသည်။
ဒီ post မှာအပြာရောင်အပူဓါတ်ရောင်ခြည်များအသုံးပြုခြင်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများ, အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များကိုဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။ ဒီဟာကိုမင်းပိုသိချင်လား။
အဝတ်လျှော်အဝတ်လျှော်ရေသည်ရေ၊ လျှပ်စစ်နှင့်ဆပ်ပြာသုံးစွဲမှုတို့ကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာကြီးမားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေးစားရန်ဂေဟစနစ်အဝတ်လျှော်စက်များတီထွင်ခဲ့သည်။
Alcalá de Henares တွင်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်မှနေအိမ် ၁၂၀၀၀ ကိုအကျိုးပြုနိုင်သော "Alcalá District Heating" စီမံကိန်းရှိသည်။
ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ထုတ်လွှတ်မှုလျှော့ချရေးရည်မှန်းချက်ကိုပြည့်မီခြင်းအားဖြင့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားခများကို ၅၅ ရာခိုင်နှုန်းအထိလျှော့ချနိုင်သည်။
HomeBiogas ၏အကူအညီဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အော်ဂဲနစ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုဆွေးထုတ်လုပ်ရန် (သို့) ဇီဝဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်ရန်နှင့်မီးဖိုချောင်တွင်အသုံးပြုရန်ဖြစ်စေကျွန်ုပ်တို့၏အော်ဂဲနစ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းနှစ်ခုကိုခွဲဝေချထားပေးနိုင်သည်။
Castilla-La Mancha သည်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ကိုထောက်ပံ့သည်
Castilla-La Mancha သည်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်နှင့်စွမ်းအင်ထိရောက်စွာထောက်ပံ့မှုများကိုမြှင့်တင်လိမ့်မည်။ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းနိုင်သောစွမ်းအင်များသည်နေအိမ်များ၊ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများနှင့်ကုမ္ပဏီများတွင်နေထိုင်နိုင်ရန်အတွက်ဘူမိအပူစွမ်းအင်၊ လေနှင့်ဖိုဗောလိတ်စွမ်းအင်တို့ဖြစ်သည်။
Cabildo de La palma သည်ယူရို ၂၀၀,၀၀၀ ကိုမိမိကိုယ်ကိုစားသုံးမှုအတွက်ခွဲဝေချပေးသည်
La Palma သည်ပြည်သူလူထုအကြားကိုယ်ပိုင်စားသုံးမှုကိုတိုးမြှင့်သွားမည်။ သင်၏အဆိုပြုချက်ကဘာလဲ။ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ကိုထောက်ပံ့သောတစ်ခုတည်းသော Cabildo လားကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရအစိုးရသည်သန့်ရှင်းသောစွမ်းအင်နှင့် ပတ်သက်၍ မည်သို့ယူဆသနည်း။
စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးနောက်ရက် ၁၀၀ အတွင်းဘက်ထရီကိုတည်ဆောက်မည်ဟုသြစတြေးလျအစိုးရနှင့် Elon Musk တို့ကအလောင်းအစားပြုလုပ်ခဲ့သည်။ မရရှိလျှင်, အခမဲ့ဖြစ်လိမ့်မည်။
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရေရှည်တည်တံ့ရေး, အမျိုးအစားများ, တိုင်းတာခြင်းနှင့်ရည်ရွယ်ချက်များ
ပတ် ၀ န်းကျင်ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲမှု၏ရည်မှန်းချက်များနှင့်တိုင်းတာမှုများနှင့်ယနေ့ကမ္ဘာပေါ်တွင်အဘယ်ကြောင့်အလွန်အရေးကြီးသည်ကိုရှာဖွေပါ
ပထမ ဦး ဆုံးဂေဟဗေဒအိမ်ငယ်ကိုပြင်သစ်တွင်ဒုက္ခသည်များလက်ခံနိုင်လိမ့်မည်။ ဤဂေဟစနစ်အိမ်များအကြောင်းသင်ပိုမိုသိလိုပါသလား။
၂၀၁၅ ခုနှစ်မှစ၍ Soria ရှိဓာတ်ငွေ့သို့မဟုတ်ဒီဇယ်ဘွိုင်လာများတွင်ရေပူများနှင့်အပူပေးမှုများအတွက်အခြားဇီဝလောင်စာများဖြင့်အစားထိုးနေခြင်းဖြစ်သည်
သုညအဆောက်အ ဦး များသည်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုအနည်းဆုံးနှင့်မိမိကိုယ်ကိုလုံလောက်စေရန်အတွက်တည်ဆောက်ထားသည့်အဆောက်အအုံများဖြစ်သည်။ သင်သိလိုပါသလား?
Tesla Powerwall2ဘက်ထရီ
Tesla Powerwall 2, Tesla ဘက်ထရီ၏ဒုတိယမျိုးဆက်အကြောင်းကိုသင်ပြောပြပါမည်။ အရင်ပုံစံနဲ့ဘယ်လိုကွာခြားသလဲ။
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးပြားနှင့် Hybrid ရထားများအိန္ဒိယတွင်လှိမ့်လည်
အိန္ဒိယမီးရထားသည်နေ့စဉ်လူ ဦး ရေ ၂၃ သန်းနှင့်ကုန်ပစ္စည်းတန်ချိန် ၂ ဒသမ ၆၅ သန်းကိုသယ်ဆောင်သည်။ ဂဏန်းများ၏ပမာဏသည်စံပုံစံပြောင်းလဲရန်လိုအပ်သည်
ကျွန်ုပ်တို့ဖြုန်းနေသောပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ကိုသိုလှောင်ရန်ဂူဂဲလ်သည်ဆားနှင့်အအေးခဲခြင်းကို အသုံးပြု၍ လောင်းရန်လိုသည်။
၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်စပိန်နိုင်ငံသည်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲသုံးစွဲမှုကို ၃% လျှော့ချခဲ့သည်။
စပိန်နိုင်ငံသည် ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကို ၃.၁% ဖြင့် ၁၃.၉% အထိလျှော့ချခဲ့သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူဥရောပ၌ ၉ ရာခိုင်နှုန်းတိုးတက်ခဲ့ပြီးစုစုပေါင်း၏ ၁၃% သို့ရောက်ရှိခဲ့သည်
စပိန်နိုင်ငံတွင်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်အခြေအနေနှင့် ၂၀၂၀ အတွက်အမြင်များ
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင်ဥရောပဈေးကွက်အတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်စွမ်းအင်ရည်မှန်းချက် (၃) ခုရှိသည်။
၎င်းသည်တစ်နှစ်လျှင် ၃၆၅ ရက်စွမ်းအင်ဖြင့်ကုန်ခန်းနိုင်သောစွမ်းအင်ရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အခြားစနစ်များနှင့်မတူဘဲယခုအချိန်တွင်မိုးလေ ၀ သအခြေအနေများကမလွှမ်းမိုးပါ။
သစ်သားအိမ်များ, သူတို့ကိုမည်သို့ရွေးချယ်ရမည်, အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များကို
ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်ဥပဒေရေးရာရှုထောင့်များအပြင်သစ်သားအိမ်များ၊ တည်ရှိနေသောအမျိုးအစားများနှင့် ၄ င်းတို့၏အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များကိုဘယ်လိုပုံဖော်မလဲ။
Dogger ကျွန်းဆိုတာဘာလဲ လူ ဦး ရေသန်း ၈၀ အတွက်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ထုတ်ပေးနိုင်သည့်အတုကျွန်း။
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင်ဥရောပရှိလူ ဦး ရေသန်း ၈၀ အားပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည့်ကျွန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
သင်အသုံးပြုသောမီးသီးများပေါ် မူတည်၍ စွမ်းအင် + သို့မဟုတ်စားသုံးနိုင်သည်။ မီးသီးအမျိုးအစားများ၊ သူတို့၏စွမ်းအား၊ သုံးစွဲမှု၊ ကြာချိန်၊ စျေးနှင့်ခေတ်ရေစီးကြောင်း။
ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစွန့်ပစ်ပစ္စည်းသည်ဤနည်းဖြင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။ အမှိုက်သရိုက်များသည်ကျွန်ုပ်တို့သုံးစွဲသောလေ၊ မြေနှင့်ရေတို့၏အရည်အသွေးကိုမည်သို့အကျိုးသက်ရောက်သည်ကိုသင့်အားပြောပြပါမည်။
2018ပြီလ ၂၂ ရက်၊
Earth Day 2018 ကိုနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းAprilပြီလ ၂၂ ရက်နေ့တွင်ကျင်းပပါမည်။ ၁၉၇၀ သည်ဤပွဲကိုပထမဆုံးကျင်းပသောနှစ်ဖြစ်သည်။ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်
၂၀၃၀ ပြည့်နှစ်တွင်စွမ်းအင်ရည်မှန်းချက်ဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းကို IEA၊ ကမ္ဘာ့ဘဏ်သို့မဟုတ် IRENA တို့ကအခြားနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများမှထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
လမ်းလျှောက်နေစဉ်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ခြင်းသည်ဖြစ်နိုင်သည် (Pavegen smart tiles)
Pavegen စမတ်ကြွေပြားများကြောင့်လေဆိပ်များ၊ ဈေးဝယ်စင်တာများနှင့်ဘောလုံးကွင်းများ၌လျှင်မြန်စွာစီးနင်းခြင်းကစွမ်းအင်ကိုထုတ်ယူနိုင်ပြီးငွေတောင်းခံမှုကိုလျှော့ချနိုင်သည်
နီးပါးသုညစွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနှင့်အတူအဆောက်အ ဦး များ
စပိန်တွင်အဆောက်အအုံများကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်မှအများဆုံးစွမ်းအင်ထိရောက်စွာတည်ဆောက်နိုင်ရန်ဥရောပလမ်းညွှန်မှုကို ၂၀၁၀-၃၁ နှင့်အညီလိုက်လျောညီထွေစွာလုပ်ဆောင်ရန်များစွာရှိသည်
America's First Solar City, Babcock Ranch
ပထမဆုံးနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးမြို့သည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်ရှိပြီး၊ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများ၊ ရပ်ကွက်ဥယျာဉ်များစသည့်မြို့ကြီးဖြစ်သော Babcock Ranch ဟုခေါ်သည်။
၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ASIA နှင့် EUROPE အကြားကွာခြားချက်သည်မဂ္ဂါဝပ် ၆၀၀၀ ကျော်ရှိခဲ့ပြီးတစ်နှစ်အကြာတွင် ၁,၅၀၀ သာရှိခဲ့သည်။ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်နှင့်ဇီဝလောင်စာ၏အနာဂတ်
Malaga ရှိဘတ်စ်ကားကုမ္ပဏီသည်ဘတ်စ်ကားများကိုရေဆေးရန်မိုးရေကိုအသုံးပြုသည်။ ဒါကသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရေရှည်တည်တံ့တဲ့ technique ကိုဖြစ်ပါတယ်
၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင် ၉% ထပ်မံတပ်ဆင်ခဲ့ပြီးကဏ္ year အတွင်းရှိကြီးမားသောဆန်းသစ်တီထွင်မှုများကြောင့်ယခင်နှစ်ထက် ၂၃ ရာခိုင်နှုန်းလျော့နည်းခဲ့သည်။
Greenpeace မှလူတိုင်းအတွက်သန့်ရှင်းသောစွမ်းအင်ရှိသောကမ္ဘာသည်ဖြစ်နိုင်ပြီးရှင်သန်နိုင်ကြောင်းပြောဆိုသည်။ ထို့ကြောင့်အရေးကြီးဆုံးသောဒဏ္someာရီအချို့ကိုဖျက်သိမ်းရန်သူ့ဟာသူဆက်ကပ်အပ်နှံခဲ့သည်။
စွမ်းအင်ချွေတာသောမီးသီးများ၏ lumens ၏တွက်ချက်မှု
စွမ်းအင်ချွေတာသောမီးသီးများ၌၎င်းတို့ကို၎င်းတို့၏ luminosity အရခွဲခြားသတ်မှတ်သည်။ ၎င်းသည်ထုတ်လွှတ်သောအလင်းပမာဏကိုအတိအကျညွှန်ပြသော "lumens" ဟုခေါ်သည့်ယူနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ခေါင်မိုးပေါ်တွင်နေရာချထားသည့် photovoltaic panel များနှင့်မတူဘဲနေရောင်ခြည်ဖြည့်ပြားများသည်လှပမှုရှိပြီးပန်းကန်တစ်ခုကဲ့သို့စွမ်းဆောင်ရည်နီးပါးရှိသည်။
Canary Islands သူတို့၏စွမ်းအင်ပုံစံကိုရေနံမှပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲရန်သို့ပြောင်းလဲနေကြသည်
အဆိုပါ Canary ကျွန်းများစွမ်းအင်မော်ဒယ် (နှင့်၎င်းတို့၏ဖြေရှင်းချက်) ၏ပြproblemsနာသုံးခု။ ကျွန်းများအကြားအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှု။ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်များပိုမိုအသုံးပြုမှု။ ရေနံ
တက်စလာသည်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ဖြင့် ၁၀၀% ထောက်ပံ့ပေးသောမြို့တစ်မြို့ကိုဆောက်လုပ်ရန်သွားမည်ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်လမ်းလျှောက်သူလမ်းများပါ ၀ င်သည်
ထရပ်ကားနောက်တွဲယာဉ်များပေါ်ရှိ photovoltaic ခေါင်မိုးသည်တစ်လလျှင်လောင်စာဆီ ၁၅၈ လီတာကိုသက်သာစေသည်
ကုန်ကျစရိတ်လျှော့ချခြင်းသည် photovoltaics သည်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအတွက် (အအေးခံကုန်တင်ကားများ) တွင်ပိုမိုဆွဲဆောင်နိုင်စေသည်။ နေစွမ်းအင်နှင့်အနာဂတ်၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်
Wright Electric သည် ၁၀ နှစ်အတွင်းနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးလေယာဉ်တည်ဆောက်ရန်ရည်မှန်းချက်ချမှတ်ခဲ့သည်။ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်နှင့်လျှပ်စစ်မော်တော်ယာဉ်များ၏အနာဂတ်။ နေရောင်ခြည်
အစိုးရကပြန်လည်ထုတ်ယူနိုင်သောမဂ္ဂါဝပ် ၃၀၀၀ လေလံကိုလေလံတင်သည်
ပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်သောနည်းပညာများကိုမဂ္ဂါဝပ် ၃၀၀၀ အထိလေလံတင်မည့် RD ကိုအစိုးရကအတည်ပြုခဲ့သည်။ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်နှင့်စပိန်တွင်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်၏အနာဂတ်
Castilla y Leónသည်အိမ်နီးချင်းလူမှုအသိုင်းအ ၀ န်းရှိ ၃ မီလီယံယူရိုစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုစီမံကိန်းများကိုထောက်ပံ့မည်ဖြစ်သည်
Castilla y Leónရှိထောက်ပံ့မှုများ။ စွမ်းအင်ထိရောက်မှု။ မြို့ကြီးများရှိပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်များအကောင်အထည်ဖော်မှု။ Olot ရှိလေအေးပေးစက်ကွန်ယက်အသစ်
ဟာဝိုင်ယီရှိတက်စလာ၏စက်ရုံသစ် - ဘက်ထရီ ၂၇၂ ခုရှိသည်
တက်စလာသည်ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာရှိဝေးလံသောကျွန်းများသို့သန့်ရှင်းသောစွမ်းအင်များပေးရန်စွမ်းအင်တိုးချဲ့ရေးအစီအစဉ်ကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ HyperLoop, SpaceX, Solarcity, Powerwall, Powerpack
ဘရပ်ဆဲလ်သည်စပိန်နိုင်ငံမှလျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲမှုနှင့်ပြည်သူလူထု၏ဗီတိုအာဏာနှင့် PP တို့အားအတားအဆီးများကိုကိုယ်ပိုင်စားသုံးရန်တားမြစ်ထားသည်။ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်
၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင်စတင်ခဲ့ပြီး ၂၀၂၀ တွင်အဆုံးသတ်မည့်ဥရောပရန်ပုံငွေများမှာအဆောက်အ ဦး များအတွင်းစွမ်းအင်ထိရောက်မှုရှိစေရန်ဖြစ်သည်။
PP နှင့် C တို့၏လျှပ်စစ်သုံးစွဲမှုဥပဒေကိုဗီတိုအာဏာသုံးသည်
ကွန်ဂရက်ဘုတ်အဖွဲ့သည် PP နှင့် Citizens တို့၏ပံ့ပိုးမှုဖြင့်အစိုးရ၏လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲမှုအပေါ်ဗီတိုအာဏာကိုအတည်ပြုခဲ့သည်။ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်
စွမ်းအင်သက်သာမှုဖြင့် ၂၂% ကိုချွေတာနိုင်
စွမ်းအင်ချွေတာခြင်းအပေါ် အခြေခံ၍ တာ ၀ န်ယူမှုရှိသောစားသုံးမှုသည်စွမ်းအင်ထိရောက်မှုတိုးတက်စေရန်အဓိကသော့ချက်ဖြစ်သည်။
E.ON သည်အသုံးပြုသူများကိုကိုယ်တိုင်သုံးစွဲရန်တိုက်တွန်းထားပြီးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်သိမ်းဆည်းခြင်းများပြုလုပ်နိုင်သည့် SolarCoud ဟုခေါ်သောစနစ်တစ်ခုကိုအကောင်အထည်ဖော်လိမ့်မည်။ ကိုယ်ပိုင်စားသုံးမှုအနာဂတ်
ဆိုလာအိမ်များသည်အမျိုးမျိုးသောအမျိုးအစားများဖြစ်နိုင်ပြီးနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်၊ အားနည်းသောရေကဲ့သို့သောအားသာချက်များရှိသည်။ အနာဂတ်၏အိမ်များကိုဤနေရာတွင်ဖြစ်ကြသည်။
နှစ်စဉ်အိမ် ၁၀ လုံးအနက် ၂ ခုသည်အပူကိုမဖွင့်နိုင်သည့်နိုင်ငံများတွင်လူ ၇၀၀၀ ကျော်သေဆုံးသည်။ စွမ်းအင်ဆင်းရဲမွဲတေမှုသေဆုံးမှုကြာပါသည်။
စပိန်သည်အီးယူတစ်ခုလုံးတွင်ပဉ္စမအမြင့်ဆုံးစျေးရှိသည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲမှုသည်တစ်ကီလိုဝပ်နာရီအား ၀.၂၃၇ ဆင့်ကုန်ကျသည်။
ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကျိုးအရှိဆုံးအိမ်တစ်လုံးကို Ibiza တွင်တည်ဆောက်သည်
ကမ္ဘာပေါ်တွင်စွမ်းဆောင်ရည်အမြင့်မားဆုံးအိမ်တစ်လုံးကို Ibiza တွင် Terravita မှထုတ်လုပ်သောစွမ်းအင်ချွေတာခြင်းကွန်ဖရင့်၌ပြသခဲ့သည်။
အသေးစားနှင့်အလတ်စားလုပ်ငန်းများသည်တစ်နှစ်လျှင်ယူရို ၁၂၀၀ ကို LED မီးသီးများဖြင့်စုဆောင်းနိုင်သည်
Endesa မှပြုလုပ်သောလေ့လာမှုတစ်ခုအရအသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည် LED မီးသီးများအတွက်သူတို့၏အလင်းစနစ်ကိုပြောင်းလဲပါကတစ်နှစ်လျှင်ယူရို ၁၂၀၀ ကျော်ကိုကယ်တင်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။
မက်ဒရစ်ရှိလူနေအိမ်အဆောက်အ ဦး သည်စပိန်နိုင်ငံတွင်အကြီးဆုံးဘူမိအပူစွမ်းအင်တပ်ဆင်ခြင်းရှိသည်
Schlierberg သည်စွမ်းအင်ကို ၄ ဆပိုမိုသုံးစွဲပြီးစွမ်းအင်သုံးစွဲသည်ထက်ဖြစ်သည်
Freiburg ရှိဂျာမနီရပ်ကွက်ရှိ Schlierberg တွင်၎င်းတို့သည်တစ်နှစ်လျှင်နေရောင်ခြည် ၁၀၀၀၀ ကြာသုံးစွဲသည်ထက် ၄ ဆပိုမိုစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်သည်။
တက်စလာကဘက်ထရီနှင့်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သည် ၁၀ နှစ်အတွင်းလျှပ်စစ်ဓာတ်အားစျေးသက်သာစေရန်လမ်းပြပေးသည်ဟုဆိုသည်
တက်စလာ၏အဆိုအရအိမ်ဘက်ထရီနှင့်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးပြားများတွဲဖက်မှုကြောင့် ၁၀ နှစ်ခန့်အကြာတွင်လျှပ်စစ်မီးသက်သာလိမ့်မည်။
ပထမတော့စျေးကြီးတယ်၊ ဆူညံတယ်၊ ယနေ့တွင် ionizing air purifier သည်ကျွန်ုပ်တို့ရှူနေသောလေကိုသန့်ရှင်းစေရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
လေအေးပေးစက်မပါဘဲအဆောက်အ ဦး များကိုအအေးပေးသည့်တော်လှန်ရေးစနစ်သစ်
Popup House သည်လေးရက်အတွင်းတည်ဆောက်ထားသော passive house တစ်ခုဖြစ်သည်
ဝက်အူလှည့်ကိရိယာနှင့်ပြန်လည်အသုံးပြုသည့်ပစ္စည်းများဖြင့်သာအိမ်တစ်လုံးကိုတည်ဆောက်ခြင်းသည်သိပ္ပံစိတ်ကူးယဉ်ပုံရသည်။ သို့သော်လည်း၎င်းသည် Popup House နှင့် Multipod စတူဒီယိုကိုလောင်းခြင်းဖြစ်သည်။
အဝတ်လျှော်စက်သည်၎င်း၏အကျိုးဆက်များကိုမတိုင်းတာဘဲပုံမှန် (ပုံမှန်သောက်သုံးနိုင်သော) ရေနှင့်ဆပ်ပြာများကိုမသုံးဘဲပုံမှန်ပြုလုပ်သောလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အလွန်အကျွံညစ်ညမ်းခြင်းမရှိဘဲအဝတ်လျှော်ရန်အချို့သောအကြံပြုချက်များကိုကြည့်ကြပါစို့။
စွမ်းအင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်၊ တစ် ဦး ချင်းစွမ်းအင်သိုလှောင်မှု
ပုဂ္ဂလိကတစ် ဦး ချင်းစီအနေဖြင့်လေစွမ်းအင်သို့မဟုတ်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်များဖြင့်အနည်းဆုံးမိမိတို့၏စွမ်းအင်အချို့ကိုထုတ်လုပ်ခြင်းသည်ကောင်းပါသည်။
စပျစ်ရည်ကိုမြေအောက်ခန်းလေအေးပေးစက်၏ function ကို
တစ် ဦး ကစပျစ်ရည်ကိုမြေအောက်ခန်းလေအေးပေးစက်စပျစ်ရည်ကိုမြေအောက်ခန်းပိုင်ဆိုင်နှင့်စပျစ်ရည်၏အရည်အသွေးပိုကောင်းအောင်ဆောင်ရွက်ရန်သောသူအပေါင်းတို့အဘို့မရှိမဖြစ်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ရေငွေ့သောသံ၊ ရေနွေးငွေ့စက်ရုံ၊ ဘက်ထရီစသည့်အိမ်သုံးအချို့အတွက်ရေစက်ရေလိုအပ်သည်။
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကိုလည်းလှူဒါန်းနိုင်သည်။ ၎င်းသည် Yingli Solar ကုမ္ပဏီမှလုပ်ပေးသည့်အရာဖြစ်သည်။
နာနိုနည်းပညာနယ်ပယ်တွင်တိုးတက်မှုအသစ်များသည်အထူးသဖြင့်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကဏ္ related နှင့်သက်ဆိုင်သည်။
ဒီဇိုင်းသည်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သဟဇာတဖြစ်သောထုတ်ကုန်များကိုပိုမိုစိတ်ဝင်စားလာသည်။ ဒီဥပမာတစ်ခုက ...
ခံစားတစ် ဦး ဂေဟစနစ်ပစ္စည်း
အားပြန်သွင်းနိုင်သည့် lithium ion ဘက်ထရီအသစ်များ
တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ကဟိုတယ်တွေထဲ ၀ င်လာတယ်၊
စျေးကွက်တွင် Eco friendly ရေခဲသေတ္တာပုံစံအမျိုးမျိုးရှိသည်
၀ ါးပရိဘောဂသည်အိမ်သို့မဟုတ်ရုံးအတွက်သဘာ ၀ ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်ဆိုင်သောရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်
အော်ဂဲနစ်ထုတ်ကုန်များသည်အဘယ်ကြောင့် ပို၍ စျေးကြီးရသနည်း။
ပြင်သစ်အမှတ်တံဆိပ် FYE သည်ဂေဟစနစ်ဖိနပ်ကိုပေးသည်
နယူးယောက်ရှိ ၉/၁၁ သားကောင်များကိုအမှတ်ရရန်အစိမ်းရောင်အမှတ်တရ
နောက်လာမည့်စက်တင်ဘာ ၁၁ ရက်တွင်တိုက်ခိုက်မှု၏သားကောင်များကိုအမှတ်ရရန်အထိမ်းအမှတ်အဆောက်အ ဦး နှင့်ပြတိုက်ကိုဖွင့်လှစ်လိုက်သည်
အဆိုပါ Plantbook နည်းပညာအမျိုးအစားကယ့်ကိုရေရှည်တည်တံ့သည်
နိုင်ငံပေါင်း ၁၆ နိုင်ငံရှိလျှပ်စစ်ကားများသုံးစွဲမှုအပေါ်စိတ်ဝင်စားဖွယ်စစ်တမ်း
လျှပ်စစ်ဆိုင်ကယ်ဝယ်ဖို့အကြောင်းပြချက် ၅ ချက်
အမျိုးသားများသည်သူတို့၏နေ့စဉ်ဘ ၀ များတွင်အမျိုးသမီးများထက်စွမ်းအင်ပိုမိုသုံးစွဲမှုနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်ပိုမိုသက်ရောက်မှုရှိသည်
မက္ကဆီကိုရှိဇီဝလောင်စာစွမ်းအင်ရှိသော Cogeneration စက်ရုံသစ်သည်ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းလောင်စာများပေါ် မူတည်၍ ပိုမို၍ သန့်ရှင်းသောစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ရန်ကတိပြု
သစ်သားအိမ်များသည်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲပစ္စည်းဖြစ်သောကြောင့်ဂေဟစနစ်ဆိုင်ရာအခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကောင်းမွန်သောလျှပ်ကာစွမ်းဆောင်ရည်၊ ခြောက်သွေ့။ အကျိုးရှိစွာတည်ဆောက်မှုရှိသည်။
စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုလျှော့ချခြင်းနှင့် CO2 ထုတ်လွှတ်မှုများကိုလျှော့ချခြင်းအားဖြင့်လေအေးပေးစက်များကို photovoltaic ဆိုလာပြားများမှဂေဟစနစ်ဖြင့်လည်ပတ်နိုင်သည်။
ပုံနှိပ်ထားသောစာအုပ်များထုတ်လုပ်ခြင်းသည်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုညစ်ညမ်းစေသောလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်တစ်နှစ်လျှင်သန်းပေါင်းများစွာသောသစ်ပင်များကိုခုတ်လှဲရန်လိုအပ်သည်။ အီလက်ထရွန်နစ်စာအုပ် e-book သည်စိမ်းလန်းသောအခြားနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာ့မြို့ကြီးများသည် LED မီးများဖြင့်ထွန်းလင်းထားသည်
ကမ္ဘာအနှံ့ရှိမြို့ကြီးများနှင့်မြို့ကြီးများတွင်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားစုဆောင်းခြင်းနှင့် CO2 ထုတ်လွှတ်မှုများကိုလျှော့ချပေးခြင်းဖြင့်အများပြည်သူသုံးအလင်းရောင်များတွင် LED မီးလုံးများထည့်သွင်းထားသည်။
အင်္ဂလိပ်အင်ဂျင်နီယာ Peter Hughes သည်ကားများဖြတ်သန်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောလှုပ်ရှားမှု၏အားသာချက်ကိုယူနိုင်သောချဉ်းကပ်လမ်းများအားစွမ်းအင်ဖန်တီးရန်နှင့်အများပြည်သူဆိုင်ရာအလင်းရောင်အား ၁.၅ ကီလိုမီတာအကွာအဝေးတွင်ဖန်တီးထားသည်။
မိုးရေသည်အိမ်တွင်းအမျိုးမျိုးအတွက်အသုံးဝင်သည်။ သင်ကစုဆောင်းနိုင်သည်၊ အိမ်တွင်သောက်သုံးရေလိုအပ်မှုကိုလျှော့ချပြီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုကူညီနိုင်သည်။
IDAE အဆိုအရမိုက်ကရိုဝေ့ဖ်တွင်ချက်ပြုတ်ခြင်းသည်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု၏ ၆၀ နှင့် ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းကိုသက်သာစေသည်။ ဒီဆောင်းပါးမှာရလဒ်ကောင်းတွေရရှိဖို့မိုက်ကရိုဝေ့ (ဖ်) မီးဖိုမှာဘယ်လိုချက်ပြုတ်သင့်တယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြထားတယ်။
ဂေဟဗေဒဆိုင်ရာဟိုတယ်များ - တာ ၀ န်ယူမှုရှိသောခရီးသွားရွေးချယ်မှု
အစိမ်းရောင်ဟိုတယ်များသည်အရည်အချင်းပြည့်မီရန်လိုအပ်သောလိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီရမည်။ ၎င်းတို့သည်တာ ၀ န်ရှိပြီးရေရှည်တည်တံ့သောခရီးသွားလုပ်ငန်းကိုကျင့်သုံးရန်အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
အိမ်သုံးအလိုအလျောက်စနစ်ဆိုသည်မှာအိမ်များကိုသက်သောင့်သက်သာရှိစေရန်၊ လုံခြုံစိတ်ချစေရန်နှင့်စွမ်းအင်ချွေတာရန်ထောက်ပံ့ပေးသောခေတ်မီနည်းပညာဖြစ်သည်။ အိမ်၏စွမ်းအင်အသုံးစရိတ်၊ လုံခြုံမှုနှင့်သက်တောင့်သက်သာရှိမှုကိုကျိုးကြောင်းညီညွတ်စေရန်အိမ်၏ ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်အစိတ်အပိုင်းများကိုအလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်ခြင်းပါဝင်သည်။
ဇီဝရာသီဥတုအိမ်များ (4) ။ စိုစွတ်သောဟင်းလင်းပြင်
ဇီဝရာသီဥတုအိမ်များ (3) ။ အပူအထီးကျန်
အပူကာကွယ်ခြင်းသည်စွမ်းအင်ကိုသက်သာစေရန်အကောင်းဆုံးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်အိမ်အတွင်းပိုင်းထဲသို့ ၀ င်ရောက်ရန်ပြင်ပမှလေကိုအတားအဆီးဖြစ်စေသည်။
ဇီဝရာသီဥတုအိမ်များ (2) ။ ဖြတ်ကူးလေဝင်လေထွက်
ဇီဝရာသီဥတုအိမ်များ (1) ။ တောင်ပိုင်း orientation ကို
ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုအသုံးပြုသောအိမ်များသည်သဘာဝအရင်းအမြစ်များကိုစွမ်းအင်၊ ငွေကြေးနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေးစားသောဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများပြုလုပ်ရန်ယန္တရားတစ်ခုအဖြစ်အသုံးချရန်။
ရေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် CO2 ထုတ်လွှတ်မှု
ရေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသည်ညစ်ညမ်းမှုကိုများစွာအထောက်အကူပြုသောကဏ္ sector တစ်ခုဖြစ်သည်
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်တိုးမြှင့်ရေးအတွက်ထောက်ပံ့မှုများနှင့်အကူအညီများအဖြစ်ဆိုလာပြားများကို ၀ ယ်ရန်လူအများအားတိုက်တွန်းထားသည်။
ကမ္ဘာပေါ်တွင်အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးရှိသောထောင်နှင့်ချီသောဟိုတယ်များရှိသောကြောင့်ဟိုတယ်လုပ်ငန်းသည်အရေးကြီးသောစီးပွားရေးကဏ္ sector တစ်ခုဖြစ်သည်။
နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း Greenpeace သည်နည်းပညာကုမ္ပဏီများ၏သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအပြုအမူကိုအကဲဖြတ်သည့်အစီရင်ခံစာတစ်ခုကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဒီထဲမှာ ...
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သည်အသုံးချမှုများစွာရှိသည်။ ဖွံ့ဖြိုးမှုအနည်းဆုံးတစ်ခုမှာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ဖြစ်သည်။ ဒီနည်းပညာ…
အာဖရိကသည်ကမ္ဘာ့လူ ဦး ရေ၏ ၁၅% ရှိပြီးကျယ်ပြန့်သောနယ်မြေတွင်ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်သည်။
ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်သဘာ ၀ ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုထိခိုက်စေသည့်ထုတ်ကုန်များသည်နေရာဒေသအားလုံးတွင်တွေ့နေကျကဏ္ the တစ်ခုဖြစ်သည်။
ခရီးသွားကဏ္ sector နှင့်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်
ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွင်ဟိုတယ်များ၊ ဘော်ဒါဆောင်များ၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်းများ၊ လမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့်သဘာဝတရားဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများစသည်တို့ပါဝင်သည်။ ဒီကဏ္ sector သည် ...
ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်သည်လူတစ် ဦး၊ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုကိုတိုင်းတာရန်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။
Eco အဆောက်အ ဦး များနှင့်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်
ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများတွင်စိမ်းလန်းသောအဆောက်အအုံများတဖြည်းဖြည်းပိုမိုများပြားလာသည်။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူတို့ဟာ ...
ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်အသက်တာတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်စွမ်းအင်ကို သုံး၍ မှားယွင်းစွာအသုံးပြုနေသည်ကိုသတိမပြုမိဘဲ ...
ဇီဝဓာတ်ငွေ့သည်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်ရန်ဂေဟစနစ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုစွန့်ပစ်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်အော်ဂဲနစ်ပစ္စည်းများပြိုကွဲခြင်းဖြင့်ထုတ်လုပ်သည်။ The …